Taariikh Ciyaareedka Pierre-Emerick Aubameyang - BBC Somali
Weeraryahanka qaranka Gabon iyo kooxda Borussia Dortmund Pierre-Emerick waxay sanadkan u ahayd mid muhiim ah, asigoo goolal badan dhaliyay, waxa uu gaaray rekoor cusub oo gool dhalinta Jarmalka ah, asigoo sidoo kale la sinmay kuwii hore.
Markii ugu horeysay ee horyaalka Bundesliga la bilaabay ee sanadkii 1963dii, waxaa gool dhallintii ugu badneyd gaaray, Gerd Müller, Jupp Heynckes iyo Karl-Heinz Rummenigge sanadihii la ciyaarayay, waxayna u tahay arrin muhiim ah inuu rkoor cusub oo gool dhallinta Jarmalka uu billaabo.
Laakiin laacibkan u dhashay Gabon, si hufan ayuu goolashii ugu horeeyay ee sideedii ciyaar ee bilowga xilli ciyaareedka uu u dhaliyay, asigoo rikooro cusub ku gaaray laba ciyaar gudahood.
Markii kooxdiisa ay 5-1 ku garaacday Bayern Munich horraantii October, 26-sano jirkan waxa uu galay buuga dahabiga sabab la’aan.
Markii uu goolal dhaliyay labadii ciyaar ee ugu dambeeyay ee xilli ciyaareedkii 2014-15kii, waxa uu si toos ah u ciyaaray 10 kullan oo toos ah oo Bundesliga ka mid ah, taas oo weligii uu ku guuleystay ciyaaryahankii kooxda Cologne, Klaus Allofs, ee 30 sano ka hor dheelijiray.
“Aabahey waxa uu iisheegay in aan gool dhalin karo ciyaar kastaa haddii aad doonto xaqiiqdii,” Aubameyang sidaas ayuu BBC-da u sheegay.
“Laakiin, waxaad u baahan tahay inaad heer xad dhaaf ah gaarto oo ah hiigsi, waana taasi waxa hadda aan ka shaqeynaayo.”
Kaddib hal ciyaar oo uusan gool dhallin kaddib markii uu rekoorka cusub gaaray, waxaa uu noqday qodfkii ugu sareeyay ee sanad dunida laga hadal hayn karo.
Labada ciyaar ee xigay, ee Bundesliga iyo horyaalka Europa, waxa uu dhaliyay min laba goo loo isku xigtay.
Haddana waxa uu gaaray Auba inuu 20 gool dhaliyo 17kii ciyaar ee ugu horeeyay ee kooxda Dortmund ee xilli ciyaareedkan 2015-16ka.
Xilli ciyaareedkaa 2014-15kii 33 kooxda Dortmund ee ugu wanaagsanaa ayaa la hilmaamay, waxa ay ku dhameysteen kaalinta todobaad kaddib markii bilowgii horyaalka ay caqabado la kulmeen, wuxuuna xilligaasi dhaliyay 16 gool.
Hadaba la yaab miyey ahayd markii Dortmund oo Aubameyeng oo ay ka soo kexeysteen kooxda faransiiska ee Etienne sanadkii 2013kii ay raadinayeen dhowr koox oo Yurub ka dhisan.
Si hordhac ah ayuu heshiiskiisa u kordhiyay illaa bisha Juley ee sanadka 2020ka.
Xilli qaabka kooxdiisa lala yaabanaa, ciyaarihii qaramada Afrika ee Aubameyang uu dheelay, waa qeyb kamid ah kuwa la ilaaway , inkastoo ay xulka qaranka dalkiisa ay hareen qeybihii dhexe ee Tartamada, hadana wuu ka dhexmuuqday.
Aubameyang ayaa hadda lagu soo daray liiska BBC-da ee ciyaaryahanada ku tartamaya kan ugu fiidan ee sanadkan, waana sanadkii sedaxaad.
Ra’yiga Khuborada– John Bennett, BBC World Service:
"Wuu degdeg badan yahay, laakiin ma dhameystiri karo,” waa sida eedaha Pierre-Emerick Aubameyang ka dhanka ah lagu sheegay, laakiin wuxuu cadeeyay in dhammaan ay qalad yihiin.
Waxaa jiray xilliyo cajiib u ahaa, sida qiyaanada uu sameeyo marka uu ciyaaraayo, laakiin waa sida uu joogteeyay weeraryahanka u dhashay Gabon, taas oo heerkan soo gaarsiiyay. Sanadkanna waxaa la tartami kara hal ciyaaryahan oo keli ah oo ah kan Bayern Munich ee Robert Lewandwoski.
Waxaad ku codeyn kartaanbogaan BBC-da ama idinka oo soo diraya Text fariin ah. oo aad numbarkani kusoo hagaajinaysaan 0044 7786 202 008 adigoo qofkaad doonayso numabrkiisa dooranaya.
Text 2 for André Ayew
Text 4 for Sadio Mané
Ama Text 5 for Yaya Touré